Home News Yaxye Cali Hareeri oo Si jees jees leh uga hadlay Guushii Saciid...
Yaxye Cali Hareeri oo Si jees jees leh uga hadlay Guushii Saciid Cabdullaahi Deni!!
Xoghayihii hore ee joogtada wasaaradda Arrimaha gudaha Yaxye Cali Hareeri ayaa isaga oo ka hadlayay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe wuxuu ka keenay su’aal cajiib ah.
Yaxye Cali Hareeri oo shaqo joojin uu ku sameeyay Wasiir Juxa xiligii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ayaa weydiiyay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo waxii ay ka yiraahdeen doorashadii ka dhacday magaalada Garowe.
Yaxye, ayaa su’aashiisa ay u muuqatay mid muujinaysa inaanay jirin golaha iskaashiga dowlad goboleedyada, maadaama uu meesha ka baxay hogaamiyihii golahaasi C/Welli Maxamed Cali Gaas.
Mr Gaas, ayaa ahaa ruux si weyn uga soo horjeeday dowladda Soomaaliya, waxaana uu guddoommiye u ahaa gole ay ku mideysan yihiin dowlad goboleedyada, oo ka careysnaa hab dhaqanka dowladda Soomaaliya.
Waxaa hadda muuqata in madaxweynaha Galmudug oo buuq siyaasadeed badan ku furan yahay iyo madaxweyne Axmed Madobe ay kusoo hareen golaha iskaashiga, haddii aysan helin taageerada Madaxweynaha cusub ee Puntland.